JW.ORG No Wɔ Kasa Bɔbor 300 Mu Sesei!
Hɛn Bible Ho Nwoma Ahorow Ho Dwumadzi
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Ewe (Awona) Finnish French Galician Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kabyle Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kpelle Krio Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mfantse Mingrelian Myanmar Nahuatl (Central) Norwegian Nzema Oromo Ossetian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tojolabal Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Uzbek Valencian Vezo Wallisian Welsh Xhosa Zulu
Sɛ eklek jw.org wɛbsaet no ne fã a wɔdze paw kasa ahorow no do wɔ bea a erekenkan asɛm yi a, ibohu kasa dodow bɔbor 300—biribi a ɔnntɔ kã dɛ ibohu wɔ wɛbsaet fofor biara do!
Sɛ edze kasa ahorow a wɛbsaet yi wɔ mu no dodow toto afofor a wɔagye dzin yie no ho a, ɔtse dɛn? Susu ho hwɛ: Ɔdze bodur July 2013 mu no, nna United Nationsfo hɔn wɛbsaet no wɔ kasa ahorow esia mu. Europa, a no so yɛ European Unionfo hɔn wɛbsaet no so wɔ kasa ahorow 24 mu. Google so wɔ kasa ahorow 71 wɔ do, na ibenya Wikipedia so wɔ kasa ahorow 287 mu.
Ɔgye mber pii na ama woeetum akyerɛ wɛbsaet bi ase akɔ kasa ahorow bɔbor 300 mu! Jehovah Adasefo ɔhaha pii a wɔwɔ wiadze mbea nyina, a wɔpɛ dɛ woyi Jehovah ayɛw na wɔyɛ edwuma yi no mu fã kɛse noara. Wɔahyehyɛ kasa biara ho asekyerɛfo dɛ ekuw ekuw, na wɔdze hɔn nyimdzee nye adom akyɛdze ahorow boa dze kyerɛ nsɛm a wɔakyerɛw no wɔ Borɔfo mu no ase.
JW.ORG no wɔ nsɛm afã ahorow pii a wɔkyerɛ ase kɔ kasa ahorow bɔbor 300 mu, ma ntsi sɛ ekekã wɛbsaet no n’afa ahorow no nyinara bɔ mu a, ɔsõ papaapa—no dodow bor 200,000!
Nnyɛ dɛ nyimpa pii na wotum kɔ JW.ORG wɛbsaet no do kɛkɛ, na mbom wɔagye dzin so paa. Nokwasɛm yi da edzi wɔ wɛbsaet ho akontaabupon bi a edwumakuw bi a wɔfrɛ hɔn Alexa a wɔhwɛ Internet do dwumadzi ahorow do no yɛe no mu. Wɔ ne fã “Ɔsom nye Nyamesom” hɔ no, ibohu wɛbsaet ahorow bɛyɛ 87,000 wɔ hɔ, a wiadze yi mu ɔsom etsitsir ahorow no, hɔn a wɔkyerɛw nyamesom ho nwoma ahorow, nye ahyehyɛdze a ɔtsetse dɛm no so hɔn wɛbsaet kã ho. Ɔdze bodur July 2013 mu no, nna jw.org tɔ do ebien wɔ dɛm akontaabupon yi do! Dza nna odzi kan wɔ akontaabupon no do nye eguadzi ho wɛbsaet bi a ɔda Bible nkyerɛase asorɔtow edzi.
Ɔdze bodur October 2013 mu no, nna sɛ wɔkyekyɛ mu pɛpɛɛpɛr a, hɔn a wɔkɔ jw.org wɛbsaet no do dabiara no dodow yɛ bɔbor 890,000. Yɛbɔkɔ do ara ama nyimpa a wɔwɔ mbea nyina enya Bible mu nsɛm a mfaso wɔ do no bi kwa a wonntua ho hwee.
Wɔyɛ Dɛn Kyerɛw Jehovah Adasefo Nwoma Ahorow No na Wɔkyerɛ Ase?
Yɛyɛ Bible ho nwoma ahorow wɔ kasa bɔbor 750 mu. Ebɛnadze ntsi na yekũ hɛnho yɛ dɛm edwuma yi nyinara?
JW.ORG—Ɔresesã Nkorɔfo Asetsena Ma Eesi Hɔn Yie